Bookmark the permalink.	facebook ပုံပါတာလေး
by ချစ်သူအတွက်	ဒီတစ်ခါတော့ သင်တို့ရဲ့ facebook စာမျက်နှာကို better facebook လုပ်ကြရအောင်။ပထမဦးစွာဒီနေရာကိုသွားပါ။http://www.socialfixer.com/
ပီးရင် သင်အခုသုံးနေတဲ့ အင်တာနက်ကြည့် software ကိုရွေးပါ။Mozilla Firefox တို့ Chrome စသည်ဖြင့်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အခြား software တွေကို အသံးနည်းပါတယ်။ကဲပီးရင် သူက ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။Mozilla ဆိုရင် add_ons ကရတာနဲ့ run မလားမေးလိမ့်မယ်။Run ( Installation) လုပ်လိုက်ပါ။Mozilla ခဏ restart ကျသွားပီးပြန်ပေါ်လာရင် ရပါပီ။သင့် facebok စာမျက်နှာအတွက် မေးခွန်း ၁၀ ခုမေးပါလိမ့်မယ်။သင်မဖြေတတ်ရင် အားလုံးကို next နှိပ်လိုက်ပီး ကျော်လိုက်ပါ။
ဒီလိုလေးစတွေ့နေရပါပီ။ကဲ အပေါ်ဆုံးဘားမှာ ရှိတဲ့ ခက်ရင်းခွပုံလေးကို ကလစ်လိုက်ပါ။
ဒါမျိုးလေးစတွေ့နေရရင် အပေါ်က Social Fixer Options ကို ရွေးလိုက်ပါ။အဲအထည်းကနေ စပြင်နိုင်ပါပီ။အလွယ်ဆုံးကတော့ Themes ကိုရွေးပီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဟာကို click လုပ်ပီး save လုပ်နိုင်ပါတယ်။save မလုပ်ချင်သေးရင်လဲ preview လုပ်နိုင်ပါတယ်။နမူနာပြပါလိမ့်မယ်။ကဲနောက်ထပ် အလန်း တွေကို ဘယ်လို ဆက်လုပ်မလဲဆိုရင် ကျွမ်းကျင်သူများကတော့ ကိုယ်တိုင် CSS code ရေးနိုင်ကြပါတယ်။နားမလည်သူတွေအတွက်ကတော့ သူများရေးထားတာတွေကို ကူးရတာပေါ့။
ဒီနေရာကလည်းဆိုဒ်ကောင်းလေး တစ်ခုပါပဲ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ theme ကို left column ၇ှိ အမျိုးအသားနေရာမှာ ရွေးချယ်ကာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။သင်ရွေးလိုက်ပီးရင် ဒီလိုပေါ်လာရင် Make The My Facebook Skin! ဆိုတာကိုေ၇ွးလိုက်ရင် ရပါပီ။အခြားဆိုဒ်တွေကိုလဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။http://facebookskin.com/http://www.facetheme.com/http://userstyles.org/ ဒီနေရာကတော့ နာမည်ကြီး နေရာတစ်ခုပါ။ သူကတော့ code တွေကိုပါ ဖော်ပြပေးပါတယ် ကိုလိုသလို ညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်။သူ့ကို တိုက်ရိုက်သုံးချင်ရင်တော့ Mozilla မှာပဲရပါတယ်။Mozilla add_ons ကနေ stylish ဆိုသော အရာကို ရွေးပီး Install လုပ်ထားလိုက်ရင် တိုက်ရိုက်သုံးနိုက်ပါပီ။
ကဲနောက်တစ်မျိုးကတော့Chrome မှာ background လေးပဲချိန်းတာပါ။video လေးကို ကြည့်လိုက်ပါ ရှင်းပါတယ်။ပုံလေးတွေပါ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။
ကျွန်တော့် facebook style က တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ် ဗျ။ အဲတာကတော့ facebook Time Line ကို သုံးထားတာပါ။ဆက်လက်ဖော်ပြပါမယ်။